अपरिचितहरूको परोपकार, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
Me मलाई र देश देखाउनुहोस् जुन तपाईं अब अपरिचित हुनुहुन्छ उही सद्भावना जुन मैले तपाईंलाई देखाउँछु » (संख्या ११:२:1)।
देशले कसरी अपरिचितहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्छ? र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, जब हामी अर्को देश मा परदेशी हुन्छौं हामीले कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ? उत्पत्ति २१ अनुसार अब्राहम गरारमा बस्थे। अब्राहमले गरारका राजा अबीमेलेकको विरुद्ध गरेको झूटो आरोपको बाबजुद पनि उनीसँग राम्रो व्यवहार भएको देखिन्छ। अब्राहमले आफ्नी पत्नी सारालाई मार्नबाट जोगाउनकोलागि आधा सत्य भनेका थिए। परिणाम स्वरूप, अबीमेलेकले साराको साथ व्यभिचार गरे। तर अबीमेलेकले नराम्रो कामको बदला लिएनन् तर अब्राहमकी स्वास्नी सारालाई उसलाई फर्काइदिए। अबीमेलेकले भने, “हेर, मेरो देश तिम्रो सामु छ। तपाईंको आँखामा जहाँ राम्रो छ त्यहाँ बस्नुहोस्! » उत्पत्ति २०.१1 यसै गरी उनले अब्राहामलाई सम्पूर्ण राज्यको निम्ति स्वतन्त्र मार्ग दिए। एलीशाले उनलाई एक हजार चाँदीका शेकेल पनि दिए (पद १ 16)
अब्राहमले कस्तो जवाफ दिए? उनले अबीमेलेकको परिवार र परिवारको लागि प्रार्थना गरे कि उनीहरूबाट वंध्यताको श्राप हटाइनेछ। तर अबीमेलेक अझै शंकास्पद थिए। सायद उनले अब्राहामलाई विचार गर्ने शक्तिको रूपमा देखे। त्यसैले अबीमेलेकले अब्राहमलाई सम्झाए कि तिनी र उनका नागरिकहरूले तिनीप्रति दयालु व्यवहार गरेका थिए। ती दुई व्यक्तिले एक सम्झौता बनाए र उनीहरू कुनै आक्रमण र दुश्मनी बिना सँगै बस्न चाहन्थे। अब्राहम यस कुरामा सहमत भए कि उनले अब कपट नगरे। उत्पत्ति २१:२:1 र उदारताको लागि मूल्यांकन देखाउनुहोस्।
धेरै पछि, लूका :6,31:१ मा येशूले भन्नुभयो, "र जसरी तपाईले पनि मानिसहरूले तपाईलाई गरून् भन्ने चाहानुहुन्छ, त्यस्तै गर्नुहोस्।" अबीमेलेकले अब्राहमलाई भनेको कुरा यो हो। यहाँ हामी सबैको लागि पाठ छ: चाहे हामी स्थानीय हो वा अपरिचित, हामी एकअर्कालाई मित्रैलो र दयालु हुनुपर्छ।
मायालु बुबा, कृपया हामीलाई सधैं तपाईंको आत्मा मार्फत एक-अर्कालाई मित्रवत हुन सहयोग गर्नुहोस्। येशूको नाममा आमेन!